Ra’iisul Wasaare Kheyre oo Salaan ugu tagay Imaamka Beelaha Mudullood
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ay wehliyeen Qaar ka mid ah wasiirada uu soo magacaabay ayaa shalay kulan Salaan ugu tagay Hoyga uu Muqdisho ka degan yahay Imaamka Beelaha Mudullood Imaam Maxamed Yuusuf.
Ra’iisal Wasaare Xasan Khayre: [ 48-dii saac ee lasoo dhaafay 110 ruux ayaa abaarta ay ku dishay Goboladda Bay iyo Bakool oo keliya]
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xassan Cali Khayre, oo manta markiisii ugu horeysay la kulmay guddiga gurmadka abaaraha, ayaa waxaa uu sheegay in Goboladda Bay iyo Bakool 48-dii saac ee lasoo dhaafay ay baartu ku dishay 110 ruux.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo ka hadlay Weerarkii Liido Sea Food
Ra’iisul Wasaaraha Xukumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaake oo War Qoraal ah soo dhigay Bartiisa uu ku leeyahay twitter-ka ayaa ka hadlay Weerarkii ay Al-shabaab ku qaadeen Maqaayadda Liido Sea Food,waxaana uu sheegay Ra’iisul Wasaarahu inuu Cambaareenayo Falkaasi lagu laayay dadka Shacabkaa ee aan waxba galabsan.
Ra’iisul Wasaaraha oo magacaabay Xoghayaha Joogtada ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha
Sagal Radio Services • News Report • August 18, 2015
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid ayaa si KMG ah waxaa uu u magacaabay Xoghayaha Joogtada ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Yaxye Cali Ibraahim oo ahaa Guddoomiyihii Jaamacadda SIU.
Sagal Radio Services • News Report • June 17, 2015
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke ayaa rajo ka muujiyay in Ahlusuna Wal-jameeca qeyb ka noqdaan Maamulka Gobollada Dhexe, isagoo ka dhawaajiyay in wada hadalada ka socda Dhuusa Mareeb ay meel wanaagsan marayaan.
Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid oo maanta hortagaya Golaha Baarlamaanka
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke ayaa lagu wadaa inuu saaka hortago Golaha Baarlamaanka, si uga jeediyo khudbad ku aadan qorsha howleedka Xukuumadiisa iyo wixii u qabsoomay tan iyo markii uu helay kalsoonida Baarlamaanka.